सुर्केखोला लघुजलविद्युत – दुर्गमका डेढ सय परिवार उज्यालोमा - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
सुर्केखोला लघुजलविद्युत – दुर्गमका डेढ सय परिवार उज्यालोमा
सुमेरु संबाददाता २३ बैशाख २०७६, सोमबार १५:२१
जिल्लाको दुर्गम मानिएको महाकुलुङ गाउँपालिका १ खिरौले, नाजिङ, छाराखोर लगायतका वस्तिमा विजुली पुगेपछि नागरिकले राहत महसुस गरेका छन् । सुर्केखोला लघुजलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न गरि आईतबार उद्घाटन गरिएपछि ग्रामिणवस्तिका नागरिक हर्षित भएका हुन् । उक्त आयोजनाबाट करिब डेढ सय घरधुरी उज्यालोमा बस्न पाएका छन् ।
दुई करोड ६९ लाखमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँती र नेपाल हिल्फे बोन जर्मनीका प्रोफेसर डा. फ्रयाङकले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष किराँतीले खिरौले जघुजलविद्युतले विद्युत वितरण शुरु गरेपछि गाउँपालिकालाई अध्यारो मुक्त गराउन सहयोग पुगेको बताए । नेपाल हिल्फे बोन जर्मनीका प्रोफेसर डा. फ्रयाङकले दुर्गमका नागरिकलाई उज्यालो दिने काम सफल भएकोमा खुसि व्यक्त गरे ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पेम्बा ग्याल्जेन शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको उदु्घाटन कार्यक्रममा ईको हिमाल नेपालका कार्यकारी निर्देशक नारायण ढकालले आयोजनाको आयव्य प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजना निर्माणको नेतृत्व ईको हिमालले गरेको थियो ।
३० किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको ८५ लाख ५० हजार, तत्कालिन बुङ गाउँ विकास समितिबाट करिब १७ लाख, महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट १० लाख, प्रदेश सभा ‘क’ अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रमबाट १५ लाख र नेपाल हिल्फे बोन जर्मनीको ७० लाख लगानीमा निर्माण भएको हो ।